Archive du 20180307
AAA – Tiko Andranomanelatra Omby 168 ahiana ho faty
Omby 168 amin’ny toeram-piompian’ny orinasa AAA-Tiko ao Andranomanelatra no ahiana ho faty hitsitra avokoa raha mitohy ny antsojain’ny fanjakana.
Hery Rajaonarimampianina Ampiesonin’ ireo manodidina azy
Tsy misy fivoarana intsony ny toe-draharaha eto amintsika raha ity fanjakana ity no antenaina. Raha manao jery todika amin’ny ezaka vitany ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, nandritra an’izay efa-taona nitondrany izay dia Izy ihany dia afaka mahita ireo lesoky ny fitantanany.
Antenimieram-pirenena Afaka herinandro vao handinika ilay volavolan-dalàm-pifidianana
Efa voarainay ety amin’ny Antenimieram-pirenena tamin’ny fotoam-panokafana an’ity fivoriana tsy ara-potoana voalohany amin’ity taona 2018 ity ilay volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana, hoy ny filoha lefitr’ity Andrim-panjakana Faritany Antananarivo,
Lehiben’ny faritra Atsinanana Tokony hiala…
Feno ny fepetra tokony hanalana ny lehiben’ny faritra Atsinanana, Talata Michel, hoy ny mpiara-miasa akaiky aminy raha nampita vaovao nanazava ny zava-misy eo anivon’ny fitantanana ny faritra any an-toerana.
Fitantanana ny firenena Andrankandrana no betsaka
Hotanterahina any New Dheli renivohitr`i Inde ny 11 martsa ho avy izao ny fihaonana an-tampony maneran-tany voalohany momba ny alliance solaire.
Fiainam-pirenena miha sarotra Tonga saina hatramin’ny ankizy
Tsy misy izay tsy miaiky ny olona fa tsy misy mandeha amin’izay laoniny intsony ny fiainam-pirenena ankehitriny. Ankoatra ny tsy fisian’ny fandriampahalemana dia tsy mitsaha-miaka-bidy ny entana eny an-tsena. Anisan’ireny ny vidin-jiro, ny solika izay mampitaraina ny maro tokoa.
Pety Rakotoniaina « Mandainga Rajoelina ! »
Nahoraka ery ny fanambarana ny vinan’i Andry Nirina Rajoelina na ny « Initiative pour l’émergence de Madagascar » tany ivelany ary mbola ireharehan’ny mpomba azy mandraka izao.
Fanomezana avy amin’ny vadin’ny filoha Lasa miteraka resabe
Vehivavy mpampianatra amin’ny EPP, CEG ary Lisea miisa 3000 avy amin’ny CISCO Antananarivo Renivohitra no notoloran’ny vadin'ny filoham-pirenena Voahangy Rajaonarimampianina fitaovana fasiana sakafo na ireny antsoina hoe “hotpots” ireny teny Mahamasina ny alatsinainy teo. Nisy ny fampantenana ny hafa toa ny eny Ambohidratrimo satria miisa 7 000 ireo « hotpots » hozaraina.
Antananarivo Renivohitra - Région Île de France Nanoritra ny fiaraha-miasa amin’ny ho avy
Nanatanteraka dinik’asa tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely omaly talata 6 martsa 2018 ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana sy ny filoha Lefitra Voalohan’ny Région-Ile-de France Jérôme Chartier.
Karatra maha mpanao gazety “Tsy misakana ny kaomisionina izahay”, hoy i Gérard Rakotonirina
Tsy nampitovy hevitra ny orinasa fanaovan-gazety maro sy ny minisitera ny momba ny komity natsangan’ny minisiteran’ny serasera hiantsoroka ny fizarana karatra maha matihanina momba ny fanaovan-gazety.
Ahiana hikorontana i Toamasina Navotsotry ny fitsarana ireo mpangala-jaza
Hatramin’izay dia heverin’ny maro fa honohono ny fisian’ireo olona mangalatra sy mivarotra zaza tao Toamasina. Voaporofo ny fisiany izao araka ny vokatra azon’ny polisy misahana ny heloka bevava sy ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona ao Toamasina.
Ambany tetezan’Ampasika Lasa fanariam-pakon’ny renivohitra
Manomboka miparitaka indray ny fako amin’izao. Tsy eto an-drenivohitra ihany fa voakasika ihany koa ny any amin’ny kaominina ambanivohitra toa an’i Bemasoandro Itaosy, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
FJKM - Iarivo Avaradrano Nahazo fiofanana avy amin’ny CNaPS
Notohizana teny amin’ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano ny fiofanana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon’ny FJKM.
Havanana amin’ny ratsy !
Tompondakan’ny gafy sy ny tsy fahombiazana ny fanjakana HVM, fa faran’ny gisitra kosa raha famahana olam-bahoaka. Midangana ny vidim-piainana, miakatra ny vidin-jiro, solika, vary,…
Fananana renivola Mila mifanampy ny Malagasy
Olana ny fananana renivola ampiasaina eto Madagasikara. Iaraha-mahalala ny fahambonian’ny zana-bola, 16 hatramin’ny 18% amin’ireny banky ireny ka tsy mamparisika ny Malagasy.